galmudugnews.com » Xildhibaan Ibraahim yarow “In ka badan 180 ayaa u balanqaaday Dr. Cabdullaahi Axmed Caddow in ay codadkooda siinayaan”
Home » WARARKA » Xildhibaan Ibraahim yarow “In ka badan 180 ayaa u balanqaaday Dr. Cabdullaahi Axmed Caddow in ay codadkooda siinayaan” Xildhibaan Ibraahim yarow “In ka badan 180 ayaa u balanqaaday Dr. Cabdullaahi Axmed Caddow in ay codadkooda siinayaan” galmudug on
No Comment Views 16478Xildhibaan Ibraahim Yarow oo ka mid ah siyaasiyiinta u ololeynaya musharax Dr. C/llaahi Axmed Caddow oo saxaafadda wareysi siiyey ayaa sheegay in maalmahan ay ka soconayeen hoyga uu degan yahay Dr. Caddow kulamo joogta ah oo uu la yeelanayo inta badan xildhibaanada baarlamaanka, wuxuuna xusay in xildhibaanadu ay si buuxda taageero ugu muujiyeen Dr. Caddow, isagoo musharaxa ku tilmaamay shaqsiga ugu haboon inuu xilkaasi qabto marka loo fiiriyo musharixiinta kale ee tartamaya.
“Haddii Soomaali badbaadinteeda & in dhibaatada laga baxo la doonayo xildhibaanadu waxey dooran doonaan Dr.Cabdullaahi Axmed Caddow, haddiise meel kale oo aan la ogeyn loo socdo taasi waa wax kale” ayuu yiri Ibraahim yarow, wuxuuna intaa ku daray in beesha caalamka ay soo dhoweyneyso in madax cusub ay soo baxdo, lana doorto siyaasiyiin dalka ku hogaamin kara siduu u soo ceshan lahaa nidaamkii & kala dambeyntii.
Ibraahim yarow wuxuu kaloo sheegay in Shariif Xassan aanu keligii ka dhicin jaranjarada siyaasadda, balse ay ku xigi doonaan musharixiinta kale ee ay soo wada-shaqeeyeen, wuxuuna tilmaamay in Sheekh Shariif & Cabdiweli aysan Shariif Xassan wax quman ka dambeyn doonin.
“Sheekh Shariif wuxuu marayaa waddadii uu maray Shariif Xassan, dadka siyaasadda naqdiya ee saadaalin kara marxaladda soo socoto waxey aaminsan yihiin in aysan suurtagal aheyn in Shariif Xassan uu keligii baxo, Sheekh Shariif & Cabdiwelina ay sii joogaan” ayuu yiri Ibraahim yarow, wuxuuna intaa ku daray.
“Caddow cid isla dhiririn karta ma jirto, Farmaajo haddii uu xil qaban karo shalay isagoo R/wasaare ah, oo Soomaali meel kasta oo ay joogto taageertay xilkii kama carareen oo Mahiga uma tanaasuleen, wixii uu shalay qaban waayey miyuu maanta qabanayaa.? ayuu is-weydiiyey Ibraahim Yarow.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21000 hitsContact US - 19630 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15698 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 14598 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13891 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13834 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13808 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 12902 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11755 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11688 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11676 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11505 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11496 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11328 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11165 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11036 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11036 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11008 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10585 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10325 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10085 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 9985 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 9893 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9818 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9757 hits Home About